Wararka Maanta: Khamiis, July 12, 2012-Diyaarado Dagaal oo Maanta duqeeyay Deegaanka Birta-dheer oo ku yaalla galbeedka Degmada Garbahaarey ee Gobolka Gedo
Saraakil ka tisran dowladda KMG ah oo ku sugan gobolkaas ayaa sheegay in halka la duqeeyay ay ku yaaleen saldhigyo ay Al-shabaab leedahay, iyadoo aan la ogeyn khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay duqeyntaas.
Deegaanka la duqeeyay ayaa wuxuu ka mid ahaa deegaanada ay Al-shabaab ka taliso ee ku yaala gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya, iyadoo saraakiisha DKMG ah ee ku sugan Gabarhaarey ay sheegeen in duqeyntu ay khasaare kasoo gaartay xoogagga Al-shabaab.
Xarakada Al-shabaab ayaa weli ka hadlin duqeynta loo geystay deegaanka Birta-dheer oo saraakiisha dowladda ay sheegeen inay ahayd goob laga soo abaabuli jiray weerarada lagu soo qaaday deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolkaas.
Ciidamada Kenya oo si rasmi ah ugu biiray AMISOM ayaan ka hadlin duqeynta loo geystay maanta deegaanka Birta-dheer, iyadoo duqeyntan ay kusoo beegmayso xilli ay ciidamada dowladda iyo kuwa caawinaya isku diyaarinayaan inay la wareegaan gacan ku haynta Al-shabaab.
Dowlada Kenya ayaa waxay weeraro cirka iyo dhulka ah ku haysay Al-shabaab tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii hore, iyadoo dhowr jeer ay diyaaradaheedu duqeyn ku dileen dad rayid ah oo ku noolaa deetaano ka tirsan gobollada Gedo iyo Jubbada Hoose.